Azonao atao izao ny mampandeha ny fanamarinana dingana roa an'ny Apple ao Espana. Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra. | Vaovao IPhone
Azonao atao izao ny mampandeha ny fanamarinana dingana roa an'ny Apple ao Espana. Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra.
Vaovao IPad | | Apple products, Fampianarana sy torolàlana
Ny fanamarinana dingana roa dia efa misy any Espana ankehitriny, ary toa tsy mitombina io fotoana io. Ny rafitra fiarovana vaovao hiarovana ny tsiambaratelon'ny kaontinao Apple dia nitarina Espana, Frantsa, Alemana, Italia, Kanada ary Japon. Ity dia rafitra fiarovana vaovao tena soso-kevitra hanakanana ireo mpijirika tsy hiditra amin'ny kaontinao, satria mitaky fankatoavana ny fanovana rehetra ataonao amin'ny fampiasana fitaovana izay amboarinao ho "atokisana". Izahay dia manome anao ny pitsopitsony rehetra ary manazava ny fomba handaminana azy eto ambany.
1 Inona no fanamarinana dingana roa?
2 Ahoana no iasany?
3 Ahoana no fomba hikirako azy?
4 Zava-dehibe tsy tokony hohadinoinao
Inona no fanamarinana dingana roa?
Hatramin'izao, ny fanovana nataonao tamin'ny kaonty Apple ID anao, na ny fitaovana ampidinao ao amin'ny kaontinao dia mila ny tenimiafinao fotsiny. Azo natao koa ny nanova an'io teny miafina io tamin'ny alàlan'ny fanontaniana roa tsotra izay namboarinao teo aloha. Mbola mandroso hatrany ity rafitra fanamarinana dingana ity mitaky anao hanamarina ny mombamomba anao alohan'ny hanatanterahana ny iray amin'ireto asa ireto:
Midira ao amin'ny kaonty Apple ID anao avy amin'ny mpitety tranonkala rehetra hanovana
Mividiana iTunes, App Store, na iBooks Store amin'ny fitaovana vaovao
Mangataha fanampiana amin'ny Apple Support momba ny olana mifandraika amin'ny Apple ID anao
Isaky ny te-hanatanteraka ny iray amin'ireo lahasa notondroinay teo aloha ianao hangatahina ianao hanamafy fa ianao io. Ahoana no anaovanao an'izany? Mampiasà ny iray amin'ireo fitaovana napetrakao teo aloha ho "atokisana", nomeraon-telefaona iray izay ahafahana mandefa SMS, na mampiasa fanalahidy fanarenana izay homena anao rehefa mampandeha ny serivisy.
Ahoana no fomba hikirako azy?
Ny zavatra voalohany dia ny fidirana amin'ny kaonty Apple ID anao. Raha vao miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao ianao dia tsy maintsy misafidy ny menio «Teny miafina sy fiarovana» ary valio ireo fanontaniana roa momba ny fiarovana napetrakao tamin'io fotoana io.
Ao anatin'ny menio «Fanamarinana dingana roa» dia tsy maintsy safidinao ny safidy «Manomboha» hanombohana ny dingan'ny fampidirana. Ity dia fomba iray somary lava nefa mahaliana. Ampahafantaro anao ny momba ny rafitra fiarovana ary tokony tsindrio ny «Tohizo» hanohizana. Vakio ny tombony sy ny fatiantoka ny rafitra fiarovana ary kitiho ny tohiny raha te hanohy ianao.
Tonga amin'ny iray amin'ireo dingana lehibe indrindra izahay: misafidy fitaovana azo itokisana, izay mila tsindrio eo amin'ny «Hamarino». Izy ireo dia tsy maintsy ho fitaovana namboarina miaraka amin'ny kaontinao ary miaraka amin'ny safidy "Find my iPhone" activated. Raha toa manjavozavo izy ireo dia alao antoka fa mifandray amin'ny Internet izy ireo ary tsindrio ny bokotra fanavaozana eo ambanin'ny efijery.
Amin'ny fotoana tsindrio ny manamarina anao dia hiseho ny teny miafina eo amin'ny efijery fitaovanao, izay tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny fikandrana fitetezanao ary tsindrio ny «Verify Device»
Hasaina aminao ihany koa ianao manampy isa finday izay handefasan-dry zareo SMS miaraka amina kaody hafa izay tsy maintsy ampidirinao amin'ny fikandrana vaovao ihany koa.
Raha vantany vao nampiana ny fitaovana sy ny nomeraon-telefaona dia afaka manohy mampihetsika ny serivisy isika.
Homena antsika izany fanalahidy fanarenana, izay tsy maintsy hataonay pirinty sy hotehirizina toy ny volamena amin'ny lamba amin'ny tranga ho avy. Ity tenimiafina ity no fomba tokana ahazoana ny tenimiafin'ny mpampiasa anao raha sendra hadinonao izany. Tsy maintsy miditra ao amin'ny varavarankely manaraka koa ianao.
Ampahafantarina anao indray ny fihenan'ny serivisy fanamarinana dingana roa, ary amin'ny fipihana ny "Enable two-verification Verification" dia efa nampavitrika ny serivisy ianao.
Manomboka amin'ity fotoana ity ho voaaro kokoa noho ny hatramin'izay ny kaontinao Apple. Ny fidirana amin'ny menio «Password sy Security» dia azonao atao ny manova ny fitaovana atokisanao, manala ireo izay tsy ampiasainao na manampy vaovao intsony.
Zava-dehibe tsy tokony hohadinoinao
Araka ny notaterin'i Apple, Misy zavatra telo tena lehibe tokony ho tadidinao foana:
Tsarovy ny tenimiafinao Apple ID
Manana ny fitaovana atokisanao
Manana ny lakilen'ny fanarenana anao
Raha very ny roa amin'ireo entana telo ireo dia mety tsy afaka miditra amin'ny kaontinao ianao mandrakizay, satria ny serivisy teknikan'i Apple dia tsy ho afaka hamerina ny teny miafinao na hamerina azy io. Mila roa amin'ireo farafahakeliny telo farafaharatsiny ianao mba hahafahana mamerina na mamerina ny teny miafinao. Raha very amin'ny iray amin'ireo zavatra telo ianao amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy soloinao avy hatrany amin'ny iray vaovao, fanalahidy vaovao io, fanalahidy fanarenana vaovao na fitaovana vaovao azonao atokisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Azonao atao izao ny mampandeha ny fanamarinana dingana roa an'ny Apple ao Espana. Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra.
Widget an'ny HTC-style ho an'ny volanao (Cydia)
Ny zava-misy amin'ny kristaly safira